HNB (Kuleylka Aan Gubin) sidoo kale loo yaqaano buuriga heerkulka hooseeya waa nooc cusub oo badeeco ah kaas oo isku daraya qalabka baaritaanka sigaarka iyo alaabta.Waa "sigaarka heer-kulka hooseeya" oo loogu talagalay fikradda "kuleylka aan guban".Qalabkan kuleyliyaha gaarka ah ayaa kululeeya tubaakada la shiiday ee la shiiday (Ulaha qiiqa gaarka ah) ilaa heerkul gaar ah si ay qiiq u sii daayaan dadka sigaarka cabba. dhadhanka sigaarka e-sigaar sidoo kale waa faa'iido.Nolosha batteriga, sahlanaanta isbedelka saliidda iyo qiimaha ayaa sidoo kale ah meelaha ugu muhiimsan ee horumarinta ee isticmaalayaashu ay ka filayaan alaabta sigaarka elektaroonigga ah.
Ilaa hadda, shaaha ayaa ah beddelka ugu fiican ee caleemaha tubaakada, waxay bixisaa theophylline, oo la mid ah nikotiinka, waxay leedahay shaqada dareenka dareenka.Si kastaba ha ahaatee, si ka duwan nikotiinka, kafeega iyo kookaha theobromine, theophylline maaha wax la qabatimo oo aad uga badbaado jidhka bini'aadamka.Tignoolajiyada HNB, kulaylka dhireedku wuxuu bixiyaa kobcin la mid ah, waayo-aragnimo tubaako-la'aan iyo dhadhan dhadhan.
Sababaha ay macaamiishu u doortaan alaabada HNB waxay inta badan diirada saaraan caafimaadka iyo ilaalinta deegaanka, sida caawinta joojinta sigaarka iyo joojinta falcelinta.
Xogtu waxay muujinaysaa "in la yareeyo ku-tiirsanaanta nikotiinka", "dhadhanka badan" iyo "yaraynta jawaab celinta sigaarka" ay yihiin sababaha ugu waaweyn ee soo jiidashada macaamiisha si ay u isticmaalaan alaabta HNB.Saddexdu waxay ku xisaabtameen 55%, 46%, iyo 38%.
HNB waxaa lagu heli karaa noocyo kala duwan oo dhadhan ah, oo siinaya sigaar cabba fursado ballaaran oo kala duwan si loo kordhiyo waayo-aragnimada dhadhan kasta.
Hore: HEECHI Blueberry Nicotine HNB Herbal Stick
Xiga: HEECHI Tangerine Peel Nicotine HNB Herbal Stick
Magaca Alaabta: HEECHI Nicotine-ka Joogtada ah ee HNB Herbal Stick
Dhadhan: joogto ah
Qiyaasta Ulaha: Dhexroor=7.32mm, Dherer=45.00mm,